सिद्धार्थ इन्स्योरेन्सको एजीएमबाट १५% बोनस सेयर अनुमोदन
काठमाडौ । सिद्धार्थ इन्स्योरेन्स लिमिटेडको २० औँ वार्षिक साधारणसभा आर्थिक वर्ष २०७७/७८ का लागि प्रस्तावित चुक्तापुँजी १ अर्ब १२ करोड रुपैयाँको कुल १५.७८९५ प्रतिशतले हुन आउने १७ करोड ६८ लाख ४२ हजार १०५ रुपैयाँबराबरको लाभांश पारित गरेको छ। काठमाण्डौको भृकुटीमण्डपस्थित नेपाल पर्यटन बोर्डको सभाकक्षमा भएको सभाले १५ प्रतिशतले हुन आउने...
यी तीन कम्पनीको एजीएम आज, कसको के–के छन् अजेन्डा ?
काठमाण्डौ । नेपाल स्टक एक्सचेन्ज (नेप्से) मा सूचीकृत तीन कम्पनीको वार्षिक साधारणसभा (एजीएम) आज चैत ३० गते हुन गइरहेको छ। प्रभु इन्स्योरेन्स, सिद्धार्थ इन्स्योरेन्स र साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेसनको एजीएम आज हुन गइरहेको हो। प्रभु इन्स्योरेन्सले आफ्नो २६ औँ वार्षिक साधारणसभा काठमाण्डौको तीनकुनेस्थित प्रभु कम्प्लेक्समा बिहान ११...
युनियन लाइफ इन्स्योरेन्सले डाक्यो वार्षिक साधारणसभा, के–के छन् अजेन्डा ?
काठमाण्डौ । युनियन लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेडले आफ्नो चौथो वार्षिक साधारणसभा डोकेको छ। कम्पनी सञ्चालक समितिको मंगलबार बसेको बैठकले वार्षिक साधराणसभा आउँदो वैशाख २३ गते आयोजना गर्ने निर्णय गरेको हो। सभा रुपन्देहीको भैरहवास्थित टाइगर प्लोस रिसोर्टमा बिहान १०ः३० बजेबाट हुनेछ। सभाले सामूहिक लगानी कोष सञ्चालन गर्ने र सोको...
जीवन विकास लघुवित्तको एजीएमबाट बम्पर लाभांश अनुमोदन
काठमाण्डौ । जीवन विकास लघुवित्त वित्तीय संस्थाको तेस्रो वार्षिक साधारणसभाबाट बम्पर लाभांश पारित भएको छ। गत चैत २५ गते सम्म वार्षिक साधारणसभाले संस्थाले गत आर्थिक वर्षका लागि प्रस्ताव गरेको कुल ७३.६८ प्रतिशत लाभांश अनुमोदन गरेको हो। जसमा ७० प्रतिशत बोनस सेयर र ३.६८ प्रतिशत नगद लाभांश (कर प्रयोजनार्थ) छन्। सभाले बोनस सेयर वितरणपछि...
जीवन विकास लघुवित्तको ७०% बोनस सेयर पारित गर्न आज एजीएम
काठमाण्डौ । बम्पर लाभांश पारित गर्न जीवन विकास लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेडले आफ्नो तेस्रो वार्षिक साधारणसभा आज चैत २५ गते आयोजना गर्दैछ। सभा मोरङको कटहरी–२ स्थित संस्थाको केन्द्रीय कार्यालयमा बिहान १०ः३० बजेबाट सुरु हुनेछ। सभाले गत आर्थिक वर्षको वितरणयोग्य मुनाफाबाट हाल कायम चुक्तापुँजी ६० करोड ८४ लाख रुपैयाँको कुल ७३.६८...
एभरेष्ट इन्स्योरेन्सद्वारा वार्षिक साधारणसभा आह्वान, बुक क्लोज कहिले ?
काठमाण्डौ । एभरेष्ट इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेडले आफ्नो २७ औँ वार्षिक साधारणसभा डोकेको छ। कम्पनी सञ्चालक समितिको बिहीबार बसेको बैठकले वार्षिक साधारणसभा आउँदो वैशाख २१ गते आयोजना गर्ने निर्णय गरेको हो। सभा काठमाण्डौको कमलपोखरीस्थित अग्रवाल भवनमा दिउँसो २ बजेबाट सुरु हुनेछ। सभाले आर्थिक वर्ष २०७७/७८ का लागि प्रस्तावित चुक्तापुँजी...
नेपाल टेलिकमको एजीएमबाट ४०% लाभांश अनुमोदन
काठमाण्डौ। नेपाल दूरसञ्चार कम्पनी (नेपाल टेलिकम) को चौधौँ वार्षिक साधारणसभा आज सम्पन्न भएको छ। काठमाडौंको त्रिभुवन आर्मी अफिसर्स क्लबमा सम्पन्न भएको साधारणसभाले आर्थिक वर्ष २०७७/७८ को मुनाफा रकममध्येबाट कम्पनीका सेयरधनीलाई प्रत्येक १०० कित्ता सेयर बराबर २० कित्ताको अनुपातमा बोनस सेयर र प्रतिसेयर रु. २० का दरले नगद लाभांश वितरण...
नेपाल टेलिकमको एजीएम आज, के–के छन् अजेन्डा ?
काठमाण्डौ । नेपाल दूरसञ्चार कम्पनी (नेपाल टेलिकम) को १४ औँ वार्षिक साधारणसभा (एजीएम) आज चैत २४ गते डाकिएको छ। सभा काठमाण्डौको टुँडिखेलस्थित त्रिभुवन आर्मी अफिसर्स क्लबमा बिहान ११ बजेबाट सुरु हुनेछ। सभाले गत आर्थिक वर्षका लागि घोषित लाभांश अनुमोदन गर्नेछ। कम्पनीले गत आर्थिक वर्षका लागि कुल ४० प्रतिशत लाभांश वितरण गर्ने घोषणा गरेको...
आइएमई लाइफ इन्स्योरेन्सद्वारा एजीएम आह्वान, आईपीओ जारी र मर्जरमा जाने मुख्य अजेन्डा
काठमाण्डौ । आइएमई लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेडले आफ्नो चौथो वार्षिक साधारणसभा (एजीएम) डाकेको छ। कम्पनी सञ्चालक समितिको चैत २१ गते बसेबो बैठकले वार्षिक साधारणसभा आउँदो वैशाख १४ गते आयोजना गर्ने निर्णय गरेको हो। सभा काठमाण्डौको लाजिम्पाटस्थित होटेल र्याडिसनमा बिहान ११ बजेबाट हुनेछ। सभाले विशेष प्रस्तावका रुपमा राखिने आईपीओ...
नेपाल लाइफको एजीएमबाट लाभांश अनुमोदन
काठमाण्डौ । नेपाल लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेडको आज २१ औँ वार्षिक साधारणसभा सम्पन्न भएको छ। वीरगन्जमा सम्पन्न सभाले सभाले सेयरधनीहरुलाई चुक्तापुँजीको १४ प्रतिशत बोनस सेयर तथा प्रतिसेयर रु.०.७३६८ (कर प्रयोजनका लागि) नगद लाभांश वितरणको प्रस्ताव पारित गरेको छ। बोनस सेयर वितरणपश्चात् कम्पनीको चुक्तापुँजी जीवन बीमा क्षेत्रकै...
एनआईसी एशिया बैंकको एजीएम सम्पन्न, सञ्चालकहरु चयन
काठमाण्डौ । एनआईसी एशिया बैंक लिमिटेडको २४ औँ वार्षिक साधारणसभा आइतबार काठमाण्डौको भद्रकालीस्थित आर्मी अफिसर्स क्लबमा सम्पन्न भएको छ। सभाले आर्थिक वर्ष २०७७/७८ को सञ्चालक समितिको प्रतिवेदन, लेखापरीक्षकको प्रतिवेदनसहित २०७८ आसार मसान्तसम्मको वासलात, नाफा–नोक्सान हिसाब तथा नगद प्रवाह विवरणलगायतका वार्षिक विवरणमाथि छलफल गरी...
नेपाल लाइफ इन्स्योरेन्सको एजीएम आज, के–के छन् अजेन्डा ?
काठमाण्डौ । नेपाल लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेडले आफ्नो २१ औँ वार्षिक साधारणसभा आज चैत २१ गते आयोजना गर्दैछ। सभा वीरगन्जको होटेल भिष्वामा बिहान ९ बजेबाट सुरु हुनेछ। सभाले आर्थिक वर्ष २०७६/७७ प्रस्तावित कुल १४.७३६४ प्रतिशत लाभांश अनुमोदन गर्नेछ। जसमा बोनस सेयर १४ प्रतिशत र कर प्रयोजनार्थ ०.७३६४ प्रतिशत नगद लाभांश छन्। बोनस सेयर...
प्रोग्रेशिभ फाइनान्सको एजीएमबाट लाभांश अनुमोदन
काठमाण्डौ । प्रोग्रेशिभ फाइनान्स लिमिटेडको २५ औँ वार्षिक साधारणसभाबाट गत आर्थिक वर्षको लाभांश अनुमोदन भएको छ। ललितपुरको ललितपुर–९ ज्यापू प्रज्ञा भवनमा आज भएको सभाले आर्थिक वर्ष २०७७/७८ का लागि प्रस्तावित चुक्तापुँजीको कुल ६.३१५८ प्रतिशतले हुन आउने लाभांश अनुमोदन गरेको हो। जसमा ६ प्रतिशत बोनस सेयर र कर प्रयोजनार्थ ०.३१५८ प्रतिशत...